Iny ilay raozy mena iny,
Izay natolotra ho anao ;
Vao niotazana maraina.
Tsotra meva tsisy tsiny,
Anefa tena tsara kalitao,
Sy mambabo fo sy saina.
Raozy manambara fitia,
Singa tokana iray ihany.
Mitondra hafatra lehibe,
Avy amin'olona iray tia ;
Matotra fa tsy be vinany,
Amin'izay rehetra aleha.
Raozy mena tsara fantina,
Tao anatin'ny raozy maro.
Misy ny mampiavaka azy,
Manitra e, fa tsy mantsina.
Diniho akaiky sy fantaro ;
Tena ao amin'ilavana azy,
Raozy iray izay voatahiry.
Nijanona kanto, tsara foana.
Anaty takelaka boky iray ;
Toy ny fitiavana vao nitsiry,
Niha lehibe mandava-taona ;
Tena lalaina mandrakizay.
Sokajy : Aingam-panahy, embona, Fahatsiarovana, fiainana, Fitiavana